Ekoadaoro: Fanendahana Tao Anaty Bus Tany Guayaquil · Global Voices teny Malagasy
Nandika (fr) i Olivia Martini
Voadika ny 12 Janoary 2018 13:14 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, বাংলা, English
(Marihina fa tamin'ny 21 Jolay 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Zava-misy iainan'ny Ekoadaoriana maro isan'andro, na eny an-dalambe na amin'ny fiainana andavanandro ny heloka bevava. Araka ny nasehon'ilay bilaogera José Andrés López Alvarez, izay nanatri-maso ny heloka bevava iray raha tao anaty bus tao an-tanàndehiben'i Guayaquil izy. Nanana fahatoniana hatrany i José satria tsy nisy naratra izy ary tsy nalaina ny fananany. Mitantara antsika ny antsipiriany momba ny zava-niseho sy ny zava-nitranga taorian'ny fanendahana ihany koa i Agucho tao amin'ny bilaoginy.
Raha nijanona teo amin'ny jiro mena ilay bus nandehanako dia nisy roa lahy niakatra, iray nipetraka teo afovoany ary tany aoriana ny iray. Nanomboka ny asany izy ireo raha vao nanomboka niainga ny bus. Inona moa no tokony hanomezako ny antsipiriany momba izany satria efa tratran'ny fandrobana daholo ny Ekoadaoreana rehetra ary fantatr'izy ireo izany toe-javatra izany. Ny lafiny tsara azo lazaina mikasika ity tantara ity, raha misy lazaina ho misy lafiny tsara ny resaka halatra, indrindra rehefa avy norahonan'ity mpangalatra taitai-baombina ity tamin'ny basy dia ny tsy nakan'izy ireo na inona na inona tamiko.
Satria nanana fiantohana tamin'ny fandrobana aho: “Chiro aho”
Famaritana ny “Chiro” eto Ekoadaoro.
Olona tsy manana na inona na inona any am-paosiny. Izany no nahatonga azy ireo tsy nangalatra na vola na finday tamiko; Raha ny marina, tsy nangalatra ny findaiko izy ireo satria efa nisy nangalatra volana vitsy lasa izay izany ary mbola tsy afaka nanolo izany aho. 🙂
Mitantara amintsika ny zava-nitranga tamin'ny namany i José , fotoana fohy taorian'ny nandosiran'ireo mpanendaka.
Tsara ny mahafantatra ny zava-nitranga taorian'ny fangalarana, hetsika izay niteraka fisavoritahana teo amin'ireo niharam-pahavoazana ary naha-lasa mpinamana ireo mpandeha. Nafana ny fifanakalozan-kevitra raha vao nivoaka ny bus ilay mpangalatra. Nisy ny nilaza fa sandoka ilay basy, ary tsy mifahana sy tsy mandeha, ny hafa indray nilaza fa raha niray hina izahay dia nety voasambotra izy ireo ary tsy nangalatra na inona na inona (izay mazava ho azy fa tsy hitranga mihitsy, fa izany hoe resak'ireo sasany manana “fahasahiana” fotsiny ihany taorian'ny fandrobana). Nitaky ny mpamily mba hanenjika ilay mpangalatra ny antsasaky ny olona, ny antsasany kosa niteny taminy mba hanohy haingana ny lalana ary tsy tokony hijanona mihitsy na inona na inona mitranga. Izany rehetra izany no nitranga rehefa samy nilaza ny antsipiriany momba izay zavatra nangalaran'ireo mpangalatra sy ny navelan'izy ireo izahay, tahaka ity lehilahy ity izay faly satria tsy nalain'ireo mpangalatra ny findainy Alcatel izay efa tranainy be.